Charme Vieux Lyon Palace Side
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguOdile
Buyela umva kwi-chaise longue ebomvu eqaqambileyo kwaye ulahleke kwincwadi kule ndlu ipholileyo, kumgangatho wokuqala, kwisakhiwo esiyimbali esivela kwiRenaissance. Iiyunithi zasekhitshini ezi-orenji eziphezulu ezikhazimlayo kunye nezitulo ezidlamkileyo zichasene nesilingi eziveziweyo zomthi kunye neentsika zamatye.
IHLAZIYWE ngokupheleleyo, i-65 m2, entliziyweni yendawo yabahambi ngeenyawo yesixeko esidala. Yonke into inokujongwa ngeenyawo!
Isikhululo seMetro "Vieux Lyon" kwinqanaba eli-2 -
Ithuba lokubhukisha indawo yokupaka yabucala (ukuba ikhona)
IHLAZIYWE ngokupheleleyo, i-65 m2, entliziyweni yendawo yabahambi ngeenyawo yesixeko esidala. Yon…
Ibhedi elala abantu ababini, I-King bed
4.95 ·Izimvo eziyi-259
4.95 (iingxelo zokuhlola 259)
Yonke into inomdla kulo mmandla: imbali, i-architecture, "traboules", i-gastronomy (kuzo zonke izinto ezithandayo kunye namaxabiso ..) iimyuziyam, imiboniso, ii-pubs kunye nezinye iindawo zokuzonwabisa, amagcisa kunye nokudalwa kweemarike, imarike yaseSt Antoine kunye nabavelisi bendawo ... kunye nazo zonke iziganeko zenkcubeko kunye nomculo (ubusuku be-Fourvière, umdaniso we-Biennale, i-Jazz e-Vienna) imiboniso kunye neminye imiboniso ...... izizathu ezilungileyo zokuhlala eLyon zininzi kulo nyaka, nokuba ngabakhenkethi, inkcubeko okanye ingcali.
Umgama ukusuka eLyon-Saint Exupéry Airport
imizuzu eyi-34 ngemoto xa indlela ingaxakekanga
Umbuki zindwendwe ngu- Odile
Inombolo yomthetho: 6938512378550
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lyon